माघ २६, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले विवादास्पद नियुक्ती पाएका नवनियुक्त आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई नेकपा दल विभाजनसम्बन्धी विवाद सल्टाउने जिम्मेवारी दिएको छ । आयोगको गत शुक्रबार बसेको पूर्णं बैठकले आयुक्तहरुको जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्दै भण्डारीलाई नेकपा विवादको जिम्मेवारी दिएको हो ।
निर्वाचन आयोगले कहिलेसम्म गर्ला नेकपा विवादबारे निर्क्याेल ?
फागुन १९, काठमाडौं । संसद पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै…
नेकपा विभाजन : आधिकारिकता नपाउने पक्षका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पद के हुन्छ ?
फागुन १९, काठमाडौं । संसद विघटनको कदमसँगै गत पुस ५…